Etcher: barnaamijka aad ubaahantahay inaad kuqorto nidaamyada hawlgalka ee Raspberry Pi-gaaga SD | Qalabka bilaashka ah
Etcher: barnaamijka aad u baahan tahay si aad ugu duubto nidaamyada hawlgalka ee Raspberry Pi-gaaga SD
Markaad iibsato nooc ka mid ah Guddiga Raspberry Pi, mid ka mid ah waxyaalaha ay tahay inaad sameyso ayaa ah diyaarinta kaarka xusuusta ee SD si ay u hesho nidaam hawlgal oo bootable ah oo la jaan qaadaya guddigan SBC. Si taasi u suurta gasho waxaa jira aalado badan, in kasta oo mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee aan ku talinayaa ay tahay Etcher ama balenaEtcher. Iyada waxaad kuheleysaa wax walba oo aad ubaahantahay si aad ugu diyaariso OS-gaaga SD-ga qaab dareen leh oo dhaqso badan.
Waa inaad ogaataa inay jiraan tiro badan oo ah nidaamyada hawlgalka ee horay loo taageeray oo ay ku jiraan looxa Raspberry Pi. Qeybo badan oo GNU / Linux ah ayaa horey u taageeray ARM waxayna si fiican ugu shaqeyn karaan Pi. Waxa kale oo aad leedahay nidaamyo kale oo furan oo furan oo aan ku salaysnayn Linux kernel oo gaar u ah Raspberry Pi, sida RISC OS, RaspBSD, iwm. Xitaa waxaad kaheli kartaa xoogaa adeegsi qaas ah sida Windows IoT, OpenELEC si aad uhesho xarun warbaahineed, RetroPi oo loogu talagalay ciyaaraha retro, iwm.
2 Waa maxay Etcher?
3 Tallaabooyinka loo adeegsado balenaEtcher
Hagaag, waxkastoo nidaamka qalliinka aad doorato, iyo xitaa dhowr isla SD, lama maxaa lagaa rabaa si aad Raspberry Pi u maamusho waa:
Soodejiso nidaamkaaga qalliinka. Xiriirka waxaan kaaga tagay mas'uuliyiinta Aasaasiga raspberry Pi, laakiin waxaa jira kuwa kale oo badan oo ilo kale ah.
Soo dejiso balenaEtcher ka website-ka rasmiga ah ee mashruuca.
Rakib balenaEtcher oo ku saabsan nidaamkaaga.
Adeegso Etcher si aad ugu gudbiso sawirkaaga OS kaarka SD markaa waad ka kici kartaa Pi-ga.
Dabcan, taas waxaad ugu baahan tahay PC leh kaarka akhriyaha, SD lafteeda (marka loo eego Raspberry Pi waxay noqon doontaa microSD) iyo guddiga SBC.
Waa maxay Etcher?
Balena waxay soo saartay barnaamijkan caanka ah ee loo yaqaan Etcher. In kasta oo ay taasi tahay magaca lagu yaqaan, haddana waa in la yiraahdaa waxaa loogu yeeri jiray bilowgii. Laakiin waxaa loo beddelay 2018 markii resin.io magaceeda loo beddelay balena.io.
Waa barnaamij bilaash ah oo furan oo ka hooseeya liisanka Apache 2.0. Loo adeegsaday u qor faylasha sawirada warbaahinta kaydinta Waxay guud ahaan yihiin sawirro nidaamyada hawlgalka sida ISO ama IMG oo warbaahinta la adeegsadaa badanaa waa kaararka xusuusta SD, in kasta oo ay sidoo kale taageerto USB flash drives Taasi waa, kaliya uma isticmaali kartid SD-yada Raspi-kaaga, laakiin sidoo kale inaad abuurto USB Live, u diyaarso qalab Windows 10 ah, iwm.
Intaas waxaa sii dheer, waa software-ka qaab-dhismeedka isku-dhafan, maadaama ay labadaba ka shaqeyn karto Microsoft Windows, Apple macOS iyo waliba GNU / Linux.
Inta u dhaxaysa sifooyinka kuwa ugu caansan waa:
Si toos ah u baaro warbaahinta on kaas oo aad kortaan sawirka nidaamka qalliinka. Waxaad horeyba u ogayd inay noqon karaan xusuus USB ama kaararka SD ee aad ku dhex gelisay qalabka.
Ka ilaaliya xulashada darawalnimada. Taasi waa, uma baahnid inaad ka walwasho sida barnaamijyada kale ee ku saabsan inaad qalad sameyso oo aad doorato darawalkaaga adag oo aad rartid ...
Wax walba samee hawsha si otomaatig ah mar la bilaabay, adigoon u baahnayn inaad soo dhex gasho. Sidoo kale, haddii aad rabto inaad dhowr nuqul ka samayso warbaahin kala duwan, tusaale ahaan fasal leh dhowr SBCs, marka midda hore la dhammeeyo waxay kuu oggolaaneysaa inaad isla hawshaas si dhakhso leh u sameyso.
Mustaqbalka, horumariyayaashu sidoo kale waxay rabaan inay ku daraan taageerada iswaafajinta kan kaydinta joogtada ah. Taasi waa, marka markaad abuureyso dhexdhexaad dhexdhexaad ah GNU / Linux distro, waad badbaadin kartaa isbeddelada lagu sameeyay SD ama USB. Taasi waxay abuureysaa qayb ama meel dhexe oo wax walba ku keydsan yihiin. Guud ahaan, barnaamijyada kale ee durba la jaan qaadaya tan ayaa kuu oggolaanaya inaad doorato cabirka qeybtaas.
Tallaabooyinka loo adeegsado balenaEtcher
Hadda oo aad ogtahay faahfaahinta barnaamijkan, aan aragno tallaabooyinka loo adeegsado. Waxaad arki doontaa inay aad ufudud tahay:
download BalenaEtcher daabacaadda waxaad u baahan tahay:
Wixii Windows ah: waxaad haysataa laba ikhtiyaar, mid ayaa ah .exe si aad ugu rakibto nidaamkaaga. Midda kale waa Portable aan u baahnayn in la rakibo, waad soo degsataa, furtid oo toos ayaad u maamuli kartaa.
MacOS ahaan: Waxaa jira hal ikhtiyaar oo keliya, nidaam Apple ah oo la fulin karo oo aad si fudud u rakibi karto.
Wixii Linux ah: sida kor ku xusan, sidoo kale waxaa jira hal ikhtiyaar. Waa xirmo nooc AppImage ah oo caalami ah, sidaa darteed rakibiddu waxay u shaqeyn doontaa qaybinta oo si fudud ayaa loo sameeyaa. Kaliya waa inaad maamushaa oo hawshu way bilaabmi doontaa.
Hada waa waqtigii ku rakib. Si tan loo sameeyo, socodsiiya xirmada aad dooratay. Marka laga reebo Portable-ka aan u baahnayn, sidaan horayba u idhi. Marka rakibida la dhammeeyo waad bilaabi kartaa.
Orod barnaamijka balenaEtcher oo ka dhex raadinaya barnaamijyada la heli karo ee OS-gaaga.
Iskuxirkeeda garaafku waa mid aad u fudud. Khasaare ma leh. Kaliya waa inaad sameysaa seddex talaabo:
Xulo sawirka marka hore. Furaha faylka waxaad ka aadi kartaa meesha sawirka nidaamka qalliinka ee aad dooratay laga soo dejiyey: .iso ama .img.
Tallaabada xigta waa in la doorto kaarka SD ama USB flash drive meesha aad rabto inay ku shubato.
Kadib taabasho biligleynaya, taasi waa, nuqul oo ku diyaari dhexdhexaadiyaha la doortay nidaamka aad isticmaashay si markaa loo rujin karo.
Sug inta howshu dhamaanayso ka dibna, haddii aadan nuqul ka badnayn hal dhexdhexaad, wali waad bixi kartaa.
Intaa ka dib waxaad yeelan doontaa diyaar macnahiisu yahay in lagu tijaabiyo kombiyuutarka ama Raspberry Pi….
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Raspberry Pi » Etcher: barnaamijka aad u baahan tahay si aad ugu duubto nidaamyada hawlgalka ee Raspberry Pi-gaaga SD
Xiriirka https://www.balena.io/etcher/ aaway nooca loo yaqaan 'Raspberry'?
Jawaab Juan Carlos Fischer
Gyroscope: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
ATtiny85: microcontroller oo siiya ciyaaro badan ...